Nhau - Iyo sensor mune iyo SMT yekuisa muchina yakakosha kwazvo, ine imwe mhando
SMT KUISA MACHINE
KUDZOKA Welding MACHINE
SMT ZVINOKOSHA ZVINOGONESESA
Iyo sensor mune iyo SMT yekuisa muchina yakakosha kwazvo, ine imwe mhando
Mushini wekuisa wakaenzana neirobhoti. Zvese zviito zvaro zvinopfuudzwa nema sensors zvobva zvatongwa zvoitwa nehuropi hukuru. Topco Maindasitiri achagovana newe kuti iwo wekuisa muchina une imwe mhando yesensu.
1. Inzwa yekumanikidza
Mushini wekuisa, kusanganisira akasiyana masilinda uye emagetsi jenareta, ane zvimwe zvinodiwa zvekumanikidza kwemhepo. Kana iko kumanikidzwa kunodiwa nemidziyo kuchinge kwazodiwa, muchina haugone kushanda zvakajairika, uye iyo yekumanikidza sensor inogara ichiongorora shanduko yeshanduko. Kamwe kusanzwisisika, zvinokurumidza kurira, Kuti uyeuchidze opareta kuti agadzirise nazvo munguva.
2. Negative kumanikidza Switch
Iyo yekukweva kamwene kemuchina wekuisa unoyamwa zvinhu nekumanikidza kwakashata, iyo ine yakashata yekumanikidza jenareta (jeti yekutsva jenareta) uye yekutsiva sensor. Kana iko kumanikidza kusingakwani, izvo zvikamu hazvizokwanisa kuyamwa. Kana iyo feeder isina zvikamu kana izvo zvinhu zvakanamirwa muhomwe yezvinhu uye isingakwanise kuyamwa kumusoro, iyo yekuvhiya kamwene haizoyamwa izvo zvinhu. Aya mamiriro achachinja zvakajairika mashandiro emuchina. Iyo isina kusimba yekumanikidza sensor inogara ichiongorora yakashata kumanikidza shanduko. Kana izvo zvikamu zvisingakwanise kuyamwa kana kutadza kuyamwa, zvinogona kukurumidza alarm yekuyeuchidza mushandi kutsiva feeder kana kutarisa kuti suction kamwene isina kunaka kumanikidza system yaiswa.
3. Inzwa yemufananidzo
Iyo chaiyo-nguva kuratidzwa kweanoshanda chinzvimbo chekuisa muchina kunyanya inotora iyo CCD mufananidzo sensor, iyo inogona kuunganidza akasiyana anodiwa emasaini masaini, kusanganisira chinzvimbo chePCB, saizi yechigadzirwa, uye kuburikidza nekombuta ongororo nekugadzirisa, kuiswa musoro unogona kupedzisa kugadzirisa uye kuisa basa.
4. Chinzvimbo chinzvimbo
Kufambisa uye kumisikidza kwebhodhi rakadhindwa, kusanganisira kuverenga kwePCBs, iko chaiko-nguva kuona kwekufamba kwemusoro wekuisa uye unoshanda, uye kufamba kweyeyebetsero michina, ese ane zvinyatso kudikanwa pachinzvimbo. Izvi zvinzvimbo zvinofanirwa kuzikanwa nenzira dzakasiyana siyana dzezvinonzwa nzvimbo.
3rd Floor, No. 225, Wanfeng Middle Road, Shajing, Baoan Dunhu, Shenzhen